Aaya katalinta masiirka umadda reer Puntland
ILLAAH baa Weyn Awood oo Dhan Isagaa Leh
Posted to the Web Sep 03, 2002
Siciid Diiriye Maxamed
Ku: Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland
Ku: Golaha xukuumada ee dowlad gobaleedka Puntland (Fadhigooda)
Ku: Golaha sharci dajinta ee dowlad gobaleedka Puntland (Fadhigooda)
Ku: Golaha garsoorka ee dowlad gobaleedka Puntland (fadhiggoda)
Ku: Ismada iyo odayaal-dhaqameedyada deegaanka Puntland, waxgaradka, ganacsatada, aqoonyahanada, culumaa�udiinka, dhalinyarada, haweenka, ururada bulshada iyo qaybaha kale duwan ee bulshaweynta reer Puntland dibada iyo gudaha meel walboo ay dunida ka joogaan.
Ujeedo: Aaya katalinta masiirka umadda reer Puntland
Mudanayaal iyo marwooyin. Dadweynaha reer Puntland dhamaan waan salaamayaa meel walba eey dunida ka joogaan, Marka hore aniguna waxaan ahay muwaadin reer Puntland ah magaceeyguna waa Saciid Diiriye Maxamed.
Waxaan ilaah ugu baryayaa inuu garansiiyo reer Puntland danahooda iyo u shaqeeyta dalkooda iyo dadkooda. Walaalayaal waxaa la gaaray xiligii loo baahnaa ineey umadda ku nool Puntland eey ka talin lahaayeen aayahooda danbe una soo jeesan lahaayeen u daneeynta dadkooda iyo dalkooda, taa waxaan ula jeedaa in reer Puntland eeyan ku tashan sommaliya inteeda kale.
Sidaa daraadeed waxaan shacabka reer Puntland ee ku kala baahsan shanta gobol ee Punland ka kooban tahay iyo dagmada buuhoodle iyo dhamaan walaalahooda kale ee dalka dibada uga maqan, isoo jeedinayaa isla markaan ku bogaadinayaa ineey Puntland gooni isu taagto kana go�do Soomaaliya inteeda kale gaar ahaan gobolada koonfureed, madaama eey jiraan sababa badan oo gooni isutaaga reer Puntland ka dhigayo arin lagamamaarmaan ah.
12 sano baa la sugayay in Soomaaliyo dowlad ka dhalato 12 shirna waa qabsoomeen, natiijadii kasoo baxday waxeey noqotay magaal-madaxda iyo madaxweynaha anaa leh, Somaliland waa ka badbaaday dhibka Puntland ku habsaday markeey ka goostay Soomaaliya inteeda kale.
Hase ahaatee dhibaatooyinka Puntland waxaa ka mid ah dhaawac ku yimi dhaqaalaha Puntland ilaa uu doolarkii gaaray heerkii ugu sareeyay ee uu waligii gaaro oo ah 2.300.000 sh.so. 100 doolar.
Sidaa daraadeed waxaa xukuumada iyo shacabka reer Puntland oo eey ugu horeeyaan isamada iyo waxgaradka mar labaad iyo mar sadaxaadba usoo jeedinayaa ku dhaqaaqida iyo u howl galinta talaabadaas tariikhiga ah, si dhibkaa looga badbaado waxaa lagamaarmaan ah in Puntland loo sameeyo sharci gaar ah, calan gaar ah, lacag gaar ah, sidaana ay u noqdaan jamhuuriyad ka madax banaan soomaliya inteeda kale.
Gooni isutaaga reer Puntland waa in dowlada iyo shacabka oo gacmaha isheysta eey u howlgalaan sida ugu dagdaga badan uguna haboon, ayadoo shacabka reer puntland ee dibada ku nool u howlgalaan aqoonsi u raadinta dalkood, iyo sii xooginta xiriirka Puntland iyo beesha caalamka.
Reer Puntland waa ineeyan gorgortan iyo wada xaajood ka galin gooni isutaagooda.
Gooni isutaaga Puntland waa muqadas, waana rabitaanka shacabka reer Puntland. ka talinta aayahooda iyo masiirkoodana waa arin ayaga u gssr sh, ee maaha arin reer Soomaaliya wax laga weydiinayo.
Ugu danbeyntii Soomaaliyoo dhan waxeey isu taagtay iskuna raaceen burburinta iyo baa�binta Puntland iyo shacabkeeda, waxaa arintaa marag u ah markii sanadkii 1997-dii la diiday in shirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaakiyeed lagu qabto magaalada Boosaaso, oo ka qeyb galayaashii shirka yiraahdeen waxaan doonaynaa oo doorbideynaa Hargeysa, Muqdisha ama Baydhabo.
Marka Soomalidu waxeey ku maahmaahdaa Nin aan quusan asagaa quus ah.
Wixii Su'aal qoraalkaan aad ka qabto u dir email qoraaga soo qoray ka eeg emailkiisa bilowga qoraalka
Ma doonaysaa fikirkaaga ama ogaalkaaga inaad soo bandhigto? U soo dir fikir@allpuntland.com , soo raaci magacaaga oo buuxa, iska ilaali ereyo gef ku ah Diinta Islamka, Qabiil ama Qof.
Kor u noqo ama Ku Laabo Bogga Ra'yiga Akhristaha ama Kulaabo Bogga Hore AllPuntland/Go Back Home